1. Mharidzo yepaiti.
Under nyaya 6 muMutemo No. 2004-575 kubva 21 2004 June zvokuvimba digitaalinen upfumi, izvozvo raanotaura ne Website vanoshandisa www.comme-un-pro.fr chimiro chevanhu vakasiyana-siyana vanobatana sechikamu chekushandiswa nekugadzirisa kwayo:
basa bhuku : Tranquillus -tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Iyo maneja wemabhuku munhu wepanyama .
hondo : WP SERVER SARL, kambani inosanganisirwa pasi pemutemo weFrance ine mari inosvika zviuru gumi zveeurandi, ichisarudza pekugara pa10000 rue de la Cité Foulc 7 Nîmes, yakanyoreswa neRCS yeNîmes pasi pe nhamba 30000 808 840, VAT nhamba FR474, inomiririrwa nemaneja wayo wepamutemo Fabrice Ducarme
2. Zvose zvinoshandiswa zvekushandiswa kwenzvimbo uye mazano anopiwa.
Kushandisa nzvimbo comme-un-pro.fr zvinoreva kubvuma kwakakwana kwemashoko nemamiriro ezvinhu anorondedzerwa pasi apa. Aya mamiriro ekushandiswa anogona kuchinjwa kana kuwedzerwa chero nguva, vashandisi vepanzvimbo vanokokwa kuti vatarisane navo nguva dzose.
nzvimbo comme-un-pro.fr inoshandisa nzira dzese dzainadzo kuona yakasimba uye neruzivo rwechokwadi sezvinobvira. Nekudaro, kukanganisa kana kusiiwa kunogona kuitika. Iye mushandisi weInternet saka anofanira kuona chokwadi cheruzivo rwake rwunopihwa ruzivo chete, harupere uye runofanirwa kushanduka kana kushanduka pasina ziviso.
Comme-un-pro.fr hazvina nzira iyo inogadzirisa kushandiswa kwemashoko aya, uye chero kukuvadza kwakananga kana kusina kukanganisa kunogona kuitika.
Cookies Iyo saiti comme-un-pro.fr inogona kukukumbira iwe kuti ugamuchire makuki ekushambadzira, ehuwandu uye ekuratidzira zvinangwa. Kuki ruzivo rwakaiswa pane rako rakaomarara dhiraidhi neseva yenzvimbo yauri kushanyira uye inogona kushandiswa kukutevera. Iyo ine akati wandei zvidimbu zve data zvakachengetwa pakombuta yako mune yakapfava zvinyorwa faira iyo sevha inowana kuverenga nekuchengetedza ruzivo. Zvimwe zvikamu zvesaiti ino hazvigone kushanda pasina kugamuchirwa kwemakuki
Kudzima makuki akaiswa pakombuta yako, heino peji reruzivo rweakanyanya mabhurawuza:
Hypertext links: Comme-un-pro.fr inogona kupa mazano kune mamwe mawebhusayithi kana zvimwe zviwanikwa zviripo paInternet. Comme-un-pro.fr hazvipinduri kana kuvimbisa kuti kune nzvimbo dzakadaro dzekunze uye nzvimbo. Hazvikwanisi kutongwa nemhosva ipi zvayo chero ipi zvayo inokonzerwa nehuwandu hwemasayiti aya kana kunze kwemashoko, kusanganisira ruzivo, mishonga kana mabasa anopa, kana chero kushandiswa kunogona kuitwa zvinhu izvi. Njodzi dzinobatanidza nekushandiswa uku ndeye mutoro wakakwana wemushandisi, uyo anofanirwa kutevedzera mitemo yekushandiswa.
Accessibility: Iyo saiti inogadziridzwa panguva dzakasiyana dzegore, asi inogona kuitwa kuti ive isingawanikwe. Kana iwe ukaona gap, kukanganisa kana zvinoita sekunge kusashanda, ndapota taura nezvazvo e, pakero tranquillus.france@comme-un-pro.fr, kurondedzera dambudziko racho nenzira yakarurama sezvingaita (peji rinotarisana nedambudziko, rudzi rwekombiyuta uye shanduro inoshandiswa, ...).
Chero zvinyorwa zvitsva zvinowanikwa zviri pangozi yemuyo pachake uye pasi pebasa rake chete. Somugumisiro, comme-un-pro.fr haigoni kutongerwa mhosva chero ipi zvayo kukanganisa kombiyuta yemushandisi kana chero kurasikirwa kwemarara kunobva pakutsvaga. Mukuwedzera, mushandisi wepaiti anobvumirana nekuwana shandisi achishandisa midziyo yemazuva ano, asina mavhesiki uye ane chizvarwa chekupedzisira chekushandura chinoshandiswa.
Zvose zviri mupeji iyi comme-un-pro.fr, kusanganisira, asi kwete kuongororwa, mifananidzo, mifananidzo, mavara, mavhidhiyo, mifananidzo, mazwi, logos, gifs nemifananidzo uye kuumbwa kwavo ndiyo nzvimbo chaiyo yepaiti comme-un-pro.fr kunze kweshoko rekutengeserana, logos kana zvinyorwa zvevamwe makambani kana vanyori.
Chero kuberekwa, kugoverwa, kugadziriswa, kugadziriswa, kudzorerwa kana kubudiswa, kunyange kusarura, zvezvinhu izvi zvinorambidzwa zvachose pasina kubvumwa kwakanyorwa kwakanyorwa comme-un-pro.fr. Izvi zvinomiririra kana kuberekwa, nenzira ipi zvayo chero ipi zvayo, zvinokonzera kukanganisa kunopomerwa neZvirevo L.335-2 uye zvinotevera kweChinyorwa cheUpellectual Property. Kukundikana kutevedzera kurambidzwa uku kunogadzira kukanganisa kunogona kutora mhosva yehurumende neyemhosva yevane mhosva. Mukuwedzera, vadzidzisi venyaya yakakopihwa vanga kutora mhaka yepamutemo pamusoro pako.
Kuzivisa kune CNIL:
Maererano 78 17-mutemo January 6 1978 (Akave nokuvandudza ne 2004-801 6 mutemo August 2004 pamusoro kudzivirira vanhu pamusoro kubudiswa pachavo mashoko) chokuita data, mafaira uye rusununguko, nzvimbo iyi yaiva nyaya iziviso (nhamba 2169132) kuNational Commission ye Informatics uye Liberties (www.cnil.fr).
Dunhu rega rega:
Kazhinji, iwe haufanire kutipa dhata rako pachako paunoshanyira webhusaiti yedu.
Zvisinei, iyi nheyo ine zvimwe zvisiri izvo. Zvechokwadi, nokuda kwehumwe hupi hupi hupi hupi hupi hunowanikwa newebsite yedu, unogona kudiwa kuti utitore mamwe mashoko akadai sekuti: zita rako, basa rako, zita rekambani yako, email yako kero, uye nhamba yako yefoni. Iyi ndiyo mamiriro ezvinhu apo iwe uzadza fomu inorongerwa kwauri paIndaneti, muchikamu che " udza mashoko ".
Chero mamiriro ezvinhu, iwe unogona kuramba kupa data yako pachako. Muchiitiko ichi, haungakwanisi kushandisa masayiti epaiti, sekukumbira ruzivo, kana kugamuchira zvinyorwa zvemashoko.
Pakupedzisira, isu tinokwanisa kuunganidza zvinyorwa pamusoro pako panguva yekufambisa nyore pane webhusaiti yedu, kusanganisira: ruzivo pamusoro pekushandiswa kwesaiti yedu, dzakadai senharaunda dzaunoshanyira uye mazano aunowana, kero yako IP, rudzi rwe browser yako, nguva yako yekuwana.
Ruzivo rwakadai runoshandiswa nesu uye vatinoshanda navo kushambadza, zvemukati manhamba, kuti uvandudze mhando yemasevhisi aunopihwa kwauri. Dhatabhesi idzi dzinodzivirirwa nezvakapihwa nemutemo waChikunguru 1, 1998 uchichinjisa rairo 96/9 yaKurume 11, 1996 pane kuchengetedzwa zviri pamutemo kwedatabhesi.
Maererano 38 uye vachitevera of 78 17-mutemo January 6 1978 chokuita data, mafaira uye rusununguko, mushandisi ose ane kodzero yekuwaniswa, rectification, kukanzura uye kupikiswa kune munhu date.
Kuti uite izvi, tumira chikumbiro chako kuneomme-un-pro.fr ne email: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Hapana ruzivo rwemunhu wese wewebsite comme-un-pro.fr inobudiswa pasina ruzivo rwemushandisi, kuchinjana, kutumirwa, kupiwa kana kutengeswa pane chero rubatsiro kune vamwe vatatu. Iko kungofungidzira kwekuregererwa kwenzvimbo comme-un-pro.fr uye kodzero dzake dzinotendera kuendesa ruzivo rwakadai kune anogona kutenga iye anozosungwa nechisungo chimwe chete chekuchengetedza nekugadzirisa dhata zvine chekuita nemushandisi wenzvimbo. comme-un-pro.fr.
Mamiriro ezvinhu epanguva ino comme-un-pro.fr dzinotungamirirwa mutemo French uye gakava chero kana kukakavadzana ingamuka kubva dudziro kana kuuraya aya achava chete wenharaunda yaitongwa French matare, chinoitwa chete chepasi pamusoro nomazvo matare muParis. The duramazwi mutauro dzingangoitika litigation kugarwa, chiFrench.